Tababbaraha dharka lagu qurxiyo Qoryaha - Qoob-shubida - GO! DUGSIYADA SPECTRUM (QAYBTA TIME // DBSO // DULUCDA CAMPUS)
Samee adduunka wax yar
Waxaan bixinaa tababar macquul ah
timo jaraha iyo timo jarista
Timo-hagar iyo timo-jare
Sida rinjiga waxaad siin kartaa ragga iyo dumarka labadaba sax ah. Waxaa muhiimad weyn u leh daryeelka timaha, marka la dhaqo iyo midabaynta. Waxa kale oo aad baraneysaa sida loo qaabeeyo timaha ku-meel-gaarka ah. Waxaad sidoo kale baraneysaa sida loo daryeelo tuugada tababarka. Waxaan kale oo aan ku baraynaa aasaaska daryeelka caafimaadka.
Haddii aad si guul leh u dhameysatay tababarka timo jaraha waxa aad ku takhasusi kartaa maamulaha madaxa banaan ee saloon timo. Tababarkan dheeraadka ah ayaa si gaar ah xiiso leh haddii aad rabto inaad bilowdo ganacsigaaga.
Waxaad jeceshahay inaad u shaqeyso macaamiisha
Waxaad jeceshahay quruxda
Waxaad si dhow ula shaqeeyaan
Qalabka timo-hagaajiyaha wuxuu soconayaa laba illaa saddex sano iyadoo ku xiran waayo-aragnimadaada, xirfaddaada iyo aqoontaada hore.
Qoob-ka-shaqeeyuhu waa xirfad khafiif ah.
Shimbiruhu waxay aad u jecel yihiin suuqa shaqada.
Uma baahnid wax aqoon ah oo gaar ah oo ku saabsan koorsada Caawiyaha.
Tilmaamaha timo-hagaajinta si faahfaahsan
Kala tasho halkan miisaska casharrada ee tababarka waqtiga-dhimman ah:
Madaxa Waaxda X